musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » World Drag Mujaho: Torrence Mujaho Unobatana neToyota
Torrence Mujaho uchabatana neTimu Toyota kutanga ne2022 NHRA Camping World Drag Racing Series mwaka. Kuwedzeredzwa kweTorrence Mujaho wemauto-echikwata maviri kunowedzera kudyidzana kwechikwata cheToyota kusanganisira shanu dzeTop Fuel dragsters uye mbiri dzinonakidza Mota.
"Torrence Racing mutungamiriri mumakwikwi eNHRA, uye tinotarisira kuunza Steve naBilly mumhuri yeToyota muna 2022," akadaro Paul Doleshal, maneja weboka, Motorsports uye Assets, Toyota Motor North America (TMNA). “Tine vatyairi vasingadaviriki uye vatinoshanda navo muNHRA. Kuwedzeredzwa kwaSteve naBilly Torrence kuchango gonesa mutsara unoshamisa uyu. ”
Torrence Mujaho rave riri simba rakakura muNHRA mumakore achangopfuura. Steve akatyaira kuhwina makumi mana neshanu muma 49 zviitiko zvebasa nemakwikwi matatu eTop Fuel. Mwaka uno, Steve akahwina kapfumbamwe uye ndiye aripo mapoinzi mutungamiri. Baba vake, Billy, vakunda kaviri gore rino uye kasere muhupenyu hwavo. Kunyangwe achimhanyisa chikamu-chenguva chirongwa, Billy parizvino ari wechishanu munzvimbo yakazara poindi.
Toyota inopa zvikwata zvayo zveNHRA nemotokari dzinodhonzwa, pamwe neinjiniya, tekinoroji uye rutsigiro rwemberi kuburikidza neTRD (Toyota Mujaho Wekuvandudza). Pamusoro peTorrence Mujaho, Toyota ichaenderera mberi nekutsigira timu ichangovambwa yaAntron Brown - AB Motorsports, DC Motorsports uye Kalitta Motorsports 'timu-matambi muna 2022.
"Ndakakomborerwa kuva nekubudirira kwakawanda muhupenyu hwangu hweNHRA, asi ndinonzwa sekunge kubatana uku kutsva neToyota neTRD kuchango gonesa zvinogona kuitwa neTorrence Mujaho," akadaro Steve Torrence. “Ini ndakazvionera ndega kuti vatyairi uye zvikwata zvine chekuita neToyota havasi chikamu chehurongwa hwavo, asi chikamu chemhuri. "Ivo igadziriro yakakosha inoisa vanhu pamberi, uye ndiwo mabatirwo eboka rakarwiwa nechikwata chedu kuva chikamu chekutanga mwaka unotevera."
Steve naBilly Torrence vanobatana nemutyairi weToyota lineup inosanganisira katatu-nguva NHRA Mukurumbira weMafuta eBrown, anokunda US Nationals Alexis DeJoria, 49 mukwikwidzi mujaho Doug Kalitta, shasha yeTop Fuel Shawn Langdon na2013 Mhare inonakidza yeMota JR Todd.
Toyota iri kupemberera mwaka wayo wechi20 muNHRA gore rino. Vatyairi veToyota vakunda 137 Top Fuel uye makumi mana nemakumi matatu maMotokari Anonakidza pamwe neTop Fuel nhanhatu uye nhabvu nhatu dzeMotokari Dzakanaka panguva yayo yekuteedzana.